Iminquba yasimahla ye-WiFi iza eLondon | Iindaba zeGajethi
Kunye neefowuni zeefowuni kuye kwafuneka ukuba ziqhelane namaxesha amatsha. Ngokwanda kweefowuni eziphathwayo, le nto yayiqhelekileyo yezitrato yaqala ukusetyenziswa. Ngamanye amaxesha kuye kube nzima ukuyifumana kwaye xa uyenzile, into enzima kukuba iyasebenza (okanye icocekile). Nangona kunjalo, Iikhabhathi zinokuvuselelwa zilungelelaniswe namaxesha amatsha edijithalis. Kwenzekile eNew York, kwaye ngoku likomkhulu laseLondon elibhejayo kubo.
ILondon ibe sisixeko sesibini emhlabeni ngokuchasene ne-con Iikhabhathi ze-WiFi zasimahla Banikezela ngezinye iinkonzo ezininzi kubemi, ukusuka kwiifowuni ukuya kwiidilesi kunye nolwazi lwemozulu. Okwangoku inye kuphela esebenzayo, kodwa izicwangciso zinamabhongo.
Iikhabhathi zedolophu yenkulungwane yama-XNUMX
INew York yayisisixeko sokuqala emhlabeni ukuqala ukubonelela ngezi zinto Iikhabhathi ze-WiFi zasimahla. Emva kwabo liqela le-LinkNYC, elixhaswe lilabhoratri ezisecaleni kweAlfabhethi kwaye ezi "zii-kiosks" ezibonelela ngoqhakamshelwano kwinethiwekhi yasimahla ye-WiFi yoluntu, kodwa ikwavumela abemi ukuba benze iifowuni, babize iibhetri ze-smartphone, bafumane iimephu nezalathiso, ulwazi lwengingqi, uqikelelo lwemozulu, nokunye okuninzi. INew York sele ineekhabini ezingama-900 ezifikelela eLondon.
Eyokuqala kwezi khabhathi ze-WiFi zasimahla zikwi Isitalato iCamden High eLondons, kwaye yaqala ukusebenza ngoLwesibini odlulileyo enkosi kwisivumelwano esatyikitywa kunyaka ophelileyo phakathi kweBritane Telecom kunye neNew York. ENgilani kubizwe Kwiinki (endaweni yeeKhonkco), kwaye njengakumabhokisana aseMelika, ixhaswa ngezimali kubhengezo oluqhubeka luboniswa kwizikrini ezikumacala omabini ezi venkile.
Ngoku ka kwaziswa I-BT, uninzi lwezi ndawo zamahhala ze-WiFi ziya kuphehlelelwa kwezinye izitalato zaseLondon nakwezinye iidolophu zase-UK ngaphambi kokuphela konyaka. Ukongeza, zikhona izicwangciso zokuba ezi "zinto zakudala" zikwasebenza njengeziva zokungcoliseka kwendalo kunye nengxolo kwaye inikezela ngolwazi lwezithuthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Iindawo zokuhlala iWiFi zasimahla ziza eLondon
Into esingasokuze siyibone kumazwe ehlabathi wesithathu? #KulungileLondon
UCarlos La Madrid sitsho
Ewe, licebo elihle elo, ukongeza kusetyenziso olongezelelekileyo olunokuthi lunikezwe ngokunxibelelana rhoqo kwi-Intanethi, iLondon ibeka umzekelo kwinto entsha. Ngelishwa, into enje iphunyeziwe kwamanye amazwe anje ngeMexico (apho ndihlala khona) iya kuthatha iminyaka ukuba ifike, kodwa ke, sele ikhona indlela yokuhamba malunga nelungelo lokufikelela kwi-Intanethi.
Phendula uCarlos La Madrid